Veroño: waa maxay, asalka, astaamaha iyo fikradaha | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 23/09/2021 18:58 | Kala bixid
Markay noqoto dhaqanka caanka ah iyo saadaasha hawada, fikrado aad u xiiso badan ayaa dhasha. Mid ka mid ah fikradaha la abuuray sannadihii la soo dhaafay ayaa ah veroño. Ereygiisa waxaad ku arki kartaa wuxuu ula jeedo si fudud. Waa xilliga sannadka ee Sebtembar iyo Oktoobar oo heerkulku uusan u dhigmin xilligooda. Waxaa la dhihi karaa waa isku darka xagaaga iyo dayrta.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa waxa uu yahay veroño, sifooyinka ay yihiin iyo halka fikraddan ay ka soo ifbaxday.
1 Waa maxay veroño
2 Verroño asal ahaan
3 Fikradaha caanka ah
4 Halkee ayay saamaynta ugu badan ku yeelataa?
Waa maxay veroño
Waa fikrad loo adeegsado dhaqanka caanka ah si loo tixraaco bilaha hore ee xilliga dayrta halkaasoo heerkulku uusan u dhigmin xilligaas. Veroño waxay la kulanto xaaladaha deegaanka ee dhacaya dayrta laakiin leh heerkul sidii aad weli tahay xagaagii. Waxaad maqli kartaa dad badan oo waddada ku leh odhaahyo ay ka mid yihiin "xagaaga nabadgelyo, hello veroño" ama "weli waxaan haysan doonnaa veroño muddo."
Waxaa la dhihi karaa waa isku darka dayrta iyo xagaaga waxayna noqotay eray aad loo isticmaalo maalmahan markii subaxdii la kululaa oo galabtii qabow la bilaabay. Mid la mid ah oo aad si fiican u cuni karto xabadka waa fagaaraha magaalada galabtii iyo fiidkii maadaama aad subaxdii iyo duhurkii ku cuni kartid jalaato xeebta. Tan hore ayaa loo yaqaanay xagaaga San Miguel oo dhacay dhammaadkii Sebtember iyo bilowgii Oktoobar waxaana loola jeedaa heerkulka diiran ee xagaaga waqtiyada dayrta.
Verroño asal ahaan
Si aan isugu dayno inaan helno asalka fikradan, waa inaan dib ugu noqonnaa 2009 iyo shabakadda bulshada ee Twitter. Waa halkan halka ay bilaha ugu horreeya ka bilaabmeen halkaas oo heerkulku uusan haba yaraatee la socon xilligii sannadka ee aan joognay. Sanado badan Fikirkan ayaa aad u sii kordhayay wuxuuna gaadhay meeshii ugu sarraysay sannadkii 2015kii. Tan iyo markaas fikraddan waxaa lagu soo bandhigay maqaallo iyo warbixino badan waxaana si isa soo taraysa loogu adeegsaday dhaqanka caanka ah.
Waxaa la dhihi karaa waa hab sahlan oo lagu qeexi karo wakhtiga sannadka oo heerkulku si aan caadi ahayn uga sarreeyo kii aan hore u baran jirnay. Sidoo kale waa inaan tixgeliyaa jiilka aan ku jirno. Kuwa dhashay wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 kuma baraarugsana isbeddelka heerkulka ee isbeddelka cimiladu keenayo, maaddaama ay weli aad u yar yihiin oo aysan lahayn diiwaan hore. Kuwaas 30 jirka ah iyo ka weyn ayaa aad uga warhaya isbeddelka heerkulka ee uu sababay isbeddelka cimiladu.
Waxaan ognahay in kuleylka caalamiga ah uu sii kordhayo heerkulka celceliska caalamiga ah iyo in xilliyada qabow ay sii yaraanayaan qabowga. Tani waxay ka dhigaysaa waqtiga xagaaga inuu ka dheeraado sida caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, galabtii iyo habeenkii marka qorraxdu dhacdo ayaa awalba xoog u lahayd in la kululeeyo duhurkii, waxaan arki karnaa in heerkulku dib ugu noqday sidii ay ahaan lahayd waqtiga aan ku jirno.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo xaqiiqda ah in ereyga si aad iyo aad ah loo adeegsado dhaqanka caanka ah, haddana akadeemiyadda dhabta ah ee Isbaanishka weli lama helin. Looma aqoonsana eray rasmi ah, markaa waa uun fikrad caan ah. Waa hab aad u sahlan oo loo tixraaco waqtigan. Xaqiiqda ah in veroño aan wali lagu darin qaamuuska, micnaheedu maahan inaysan noqon karin mustaqbalka. Dhab ahaantii, ereyo badan oo lagu isticmaalo waddada ayaa galay qaamuuska. Tusaale ahaan, erayada qaarkood sida amigovio ama papichulo. Amigovio waxaa loola jeedaa qofka aad xiriirka la leedahay kaas oo leh ballanqaad ka yar kan shukaansiga.
Fikradaha caanka ah
Waxa kale oo ay ku xidhan tahay aagga aad ku nooshahay in fikradahaas la isticmaalo marar badan iyo in kale. Fikrad kale oo lagu daray Akadeemiyadda Isbaanishka ee Royal waa tan papichulo. Waxay ku saabsan tahay nin, sababtoo ah soo jiidashadiisa jireed, ayaa ah shayga rabitaanku rag ama dumarba.
Waana in akadeemiyadda dhabta ah ee Isbaanishku aysan aad u caddayn waxa ay yihiin shuruudaha looga baahan yahay eray in lagu daro liiska. Waxay u muuqataa in aqlabiyad dad ahi ay si joogto ah uga hadlaan eray gaar ah oo ay iska diiwaangeliyaan. Tani ma aha mid fudud sida ay u muuqato. Kulanka guud ee aqoonyahannadu waa inay oggolaadaan inay ogaadaan haddii eraygu ku habboon yahay ama uusan ku habboonayn in lagu daro liiska. Waxaa jiray muranno marka ay timaaddo marka lagu daro ereyada sida pepero, culamen iyo squat.
Maaha wax la yaab leh in marka la dhaafo waqtiga fikradda veroño lagu dari karo eray rasmi ah.
Halkee ayay saamaynta ugu badan ku yeelataa?
Markaan ku soo bandhigeyno veroño nolosheena, waa inaan sidoo kale ogaannaa meelaha ay ku dhacdo si joogto ah iyo xoog badan. Maskaxda ku hay in magaalooyinka gudaha iyo magaalooyinka ay leeyihiin heerkul aad u badan inta u dhaxaysa iyo habeenka. Baaxadda kuleylka waxaa bixiya maqnaanshaha badda oo hanan karta heerkulka oo dejin karta isbeddelkeeda. Sidaa darteed, maalintii oo dhan waxaan arki karnaa heerkul aad u sarreeya habeenkiina hoos u dhac aad u muuqda.
Dhinaca kale, magaalooyin badan oo xeebta ah joogitaanka veroño ayaa xoogaa ka jilicsan. Taasi waa in la yidhaahdo, Farqiga u dhexeeya heerkulka u dhexeeya kuwa duhurkii iyo galabtii si aad ah looma dareemo taas oo ku xidhan xilli sannadka aynu ku jirno. Tusaale ahaan, inta lagu jiro magaalo gudaha ah waxaa dhici karta in isbeddel lama filaan ah uu ku yimaado heerkulka in ka badan 15 digrii inta u dhaxaysa habeen iyo maalin, magaalo xeebeed waxaa ku yar.
Sidaad arki karto, dhaqanka caanka ahi wuxuu abuuraa fikrado si uu awood ugu yeesho inuu helo xaaladahaas gaarka ah ee uusan nin haysan ilaa hadda. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa veroño yahay iyo waxa sifooyinkiisu yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Verrano